Olee otú Idozi VLC audio mmekọrịta nsogbu
Ọtụtụ mgbe, ị ga-arụọla syncing nsogbu nke gị audio dị na video na-egwu egwu ọ bụla video on VLC Player. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ nnọọ obere nsogbu, nke Nwela adị na ya mgbe ụfọdụ oge. Mgbe ụfọdụ, nsogbu ọ dịghị negligible, na na nsogbu mgbe ọ bụghị chọpụtara. Ma mgbe nsogbu ọkọkpọhi na nnukwu ma na-ekiri a video bụ ekwe omume, mkpa bụ iji dozie ya site na ụfọdụ n'aka. Ebe a bụ ngwọta.
Part 1: Olee otú Idozi VLC audio mmekọrịta on Windows?
Part 2: Olee otú Idozi VLC audio mmekọrịta na Mac?
Mgbe VLC Player na-agba ọsọ na Windows na otu ahụ na nsogbu nke de-mmekọrịta nke ọdịyo na videos, nsogbu nwere ike izere site na-ewere a kwesịrị ekwesị ezu.
Gaa VLC menu, na pịa Mmasị. Pịa na Audio menu. Pịa na All na ala n'akụkụ aka ekpe na-egosipụta ihe audio mmasị. Chọta 'Audio de-mmekọrịta akwụ ụgwọ' na mmasị. Ugbu a, ọ bụ oge ka ​​ndị syncing akwụ ụgwọ ma na nti ma ọ bụ na-adịghị mma, nke kpamkpam na-adabere otú gị audio bụ nke mmekọrịta na video, ị na-egwuri egwu. Na ọnọdụ, gị audio bụ n'ihu nke video, dị nnọọ itinye ọjọọ dabeere kpọmkwem oge, mgbe ke ikpe, ọ bụ n'azụ video, mgbe ahụ, ịga n'ihu ọdịyo site n'itinye nti. Wee pịa Chekwa na-egwu gị video. Ị bụ n'aka na nke kacha mma n'ihi na gị video ga-kpamkpam synced na ọdịyo.
Lee snapshot on otú obibi nke.
Na ịkpụ nke na Mac, ihe ngwọta dị nnọọ mfe. Anyị nwere ike iji shortcut igodo na MAC maka otu na ike tufuo nsogbu nile metụtara syncing nke Audio na Video. Iji ụfọdụ nke kemfe igodo n'ụdị F isi na G Key na-ụfọdụ n'ime igodo ka ịhazie audio dị na video.
Mgbe ị pịa F Key, na ọnụ Audio Oge na milliseconds ga-esi na-arụ ọrụ, mgbe G Key ga-amụba Audio Oge na milliseconds. Ya mere, na-adabere na-egbu oge ma ọ bụ n'ihu nke ọdịyo na video, niile ị chọrọ bụ ka pịa igodo ma na-arụ ọrụ mere mfe. G eme na-akpali ndị Audio atụ mgbe F isi ga-akpali ndị Audio azụ.
Lee snapshots n'okpuru iji nweta ihe echiche, na ihe nwere ike imere gị.
Abụọ ndị a igodo nwere ike ime ebube maka gị. Niile ị chọrọ bụ ka ịhazie gị video dị na-enwe video.
Cheta na: Otú ọ dị, cheta na mgbanwe nke ị na-aga-eme ka ebe a, ga na-abụ nwa oge nakwa na ozugbo unu-emechi video na malitegharia ya, niile mgbanwe mere ga-tọgharịa na gị mkpa iji mee ka mgbanwe ọzọ ruo otu video. N'ihi ya, iji mee ka na-adịgide adịgide mgbanwe, dị nnọọ ka na na nke kacha mma video na-enweghị ndị dị otú ahụ njehie na ọdịyo.
> Resource> VLC> otú ndozi VLC audio mmekọrịta nsogbu?